OPTICAL FIBER CROSS-CONNECTION CABINET, Highly Customization Manufacture, China OPTICAL FIBER CROSS-CONNECTION CABINET, High Customization Manufacture Manufacturers, Suppliers, Factory - Qingdao etinyere teknụzụ photonic co., Ltd
OPTICAL FIBER CROSS-CONNECTION CABINET, Nnukwu nrụpụta Nhazi
Igbe nnyefe USB bụ ngwaọrụ njikọ arụnyere n'èzí. Ihe kachasị mkpa maka ya bụ iguzogide ihu igwe siri ike na ebe ọrụ siri ike. Ọ nwere njirimara nke ikuku gas na-enweghị mmiri, mmiri na-enweghị ntụ na uzuzu, ahụhụ na mmebi oke, na nkwụsi ike siri ike. Ọ ga-enwerịrị ike iguzogide ajọ ọnọdụ mpụga. Ya mere, akụkụ mpụga nke igbe ahụ dịtụ elu karịa nke mmiri na-enweghị mmiri, mmiri na-enweghị mmiri, uzuzu uzuzu, mmebi mgbochi mmechi, njikwa ahụhụ, na ihe ndị yiri ya; n'ime akụkụ nwere nnukwu ihe dị mkpa maka njikwa ọnọdụ ihu igwe na iru mmiri.
1. Igbe ahụ bụ nke efere igwe anaghị agba nchara, ike dị elu, mgbochi ịka nká, mgbochi corrosion, ma nwee ike iguzogide mmebi ihe ọghọm ma ọ bụ na-emebi. All nkuku nke igbe na-niile kpụrụ pụrụ iche gburugburu ekara akpụ ebu, na n'elu ọgwụgwọ na-leghaara ma ọ bụ electrostatically sprayed. Ọdịdị mara mma; ndị kabinet adopts abụọ-oyi akwa Ọdịdị, na n'etiti jupụtara elu-arụmọrụ okpomọkụ mkpuchi ihe onwunwe, nke nwere ezi okpomọkụ mkpuchi mmetụta na ike n'ụzọ dị irè gbochie odide na tank.
2. A na-eme ọnụ ụzọ nke akara ọnụ ụzọ pụrụ iche, mkpọchi ọnụ ụzọ na-enweghị mmiri na mkpọchi ụzọ ọnụ ụzọ atọ, nchekwa ma nwee ntụkwasị obi, mkpuchi dị mma; 12-isi welded wiring ike modul; FC, SC eriri optic nkwụnye nwere ike arụnyere
3. A pụrụ ịdabere na USB gwara na grounding nchedo ngwaọrụ; adabara njedebe nke otu isi na rịbọn cable